Ọrụ nkwụsị otu China maka imepụta na nrụpụta mmiri | ỊZỤLI-Elec
1. Isi mmiri torsion bụ isi mmiri nke na -ebu nkwarụ torsion, akụkụ ya na -arụ ọrụ na -emerụkwa ahụ nke ukwuu. Ọdịdị njedebe nke oge opupu ihe ubi torsion bụ ogwe aka torsion nke a haziri n'ụdị dị iche iche, ọ bụghị mgbanaka nko. Mmiri mmiri torsion na -eji ụkpụrụ lever na -agbagọ ma ọ bụ na -eji ihe dị nro na ike siri ike tụgharịa ihe na -agbanwe, ka o wee nwee nnukwu ike n'ibu. ◆ 2. Mmiri iyi mmiri bụ isi iyi nke na -ebu esemokwu axial. Mgbe ọ naghị ebu ibu, ihe mkpuchi nke te ...
◆ 1. Isi mmiri torsion bụ isi iyi nke na -ebu nrụrụ torsion, akụkụ ya na -arụ ọrụ na -emerụkwa ahụ nke ọma. Ọdịdị njedebe nke oge opupu ihe ubi torsion bụ ogwe aka torsion nke a haziri n'ụdị dị iche iche, ọ bụghị mgbanaka nko. Mmiri mmiri torsion na -eji ụkpụrụ lever na -agbagọ ma ọ bụ na -eji ihe dị nro na ike siri ike tụgharịa ihe na -agbanwe, ka o wee nwee nnukwu ike n'ibu.
◆2. Mmiri iyi mmiri bụ isi iyi nke na -ebu esemokwu axial. Mgbe ọ na -ebuteghị ibu, mkpuchi mmiri nke isi iyi na -esikarị ike na -enweghị nkwụsị.
◆3. Mmiri mkpakọ bụ isi iyi dị n'okpuru nrụgide axial. Akụkụ ihe eji eme ihe na -abụkarị okirikiri, mana ejirikwa akụkụ anọ na ụrọ dị iche iche mee ya. N'oge opupu ihe ubi na -adịkarị nhata. Ụdị nke mmiri mkpakọ na-agụnye cylindrical, conical, convex na ọkara concave na obere obere nke na-abụghị okirikiri. A ga -enwe oghere ụfọdụ n'etiti mgbaaka nke mmiri mkpakọ, mgbe edobere ibu mpụga, oge opupu ihe ubi na -ebelata ma deforms iji chekwaa ike nrụrụ.
◆ 4. Mmiri na -aga n'ihu. N'oge opupu ihe ubi a na -ewepụta imewe nwere ọkpụrụkpụ na njupụta na -ekwekọghị ekwekọ. Uru ya bụ na mgbe nrụgide ahụ adịghị nnukwu, ọ nwere ike nweta mmụba nke okporo ụzọ site n'akụkụ nwere ọnụọgụ na -agbanwe ala iji hụ na nkasi obi ịnya ụgbọ ala ahụ dị. Mgbe nrụgide ahụ na -abawanye ruo n'ókè ụfọdụ, oge opupu ihe ubi na akụkụ gbara ọkpụrụkpụ na -ekere òkè n'ịkwado ahụ ụgbọ. Mwepu nke oge opupu ihe ubi a bụ na mmetụta njikwa adịghị kpọmkwem na izi ezi adịghị mma.
◆5. Ọkpụrụkpụ na njupụta nke mmiri dị n'ahịrị site n'elu ruo na ala anaghị agbanwe agbanwe, ọnụọgụ na -agbanwe agbanwe bụ ihe a kapịrị ọnụ. Oge opupu ihe ubi nke imewe a nwere ike ime ka ụgbọ ala nweta nzaghachi siri ike na ahịrị, nke na -adabara onye ọkwọ ụgbọ ala ijikwa ụgbọ ala nke ọma. A na -ejikarị ya maka ụgbọ ala gbanwetụrụ arụmọrụ yana ụgbọ ala asọmpi. N'ezie, mwepu bụ na a na -emetụta nkasi obi.
◆6. E jiri ya tụnyere oge opupu ihe ubi mbụ, obere oge opupu ihe ubi dị mkpụmkpụ ma sie ike. Ịwụnye oge opupu ihe ubi dị mkpirikpi nwere ike belata etiti ike ndọda nke ụgbọ ahụ, belata mpịakọta a na -eme n'oge ntụ ọka, mee ka ntụ ọka ahụ kwụsie ike ma dị larịị, ma melite njikwa ụgbọ ala.
Ụlọ ọrụ ihe eji arụ ọrụ
● Akara: Seibu & Sodick
● Ike: Roughness Ra <0.12 / Ndidi +/- 0.001mm
● Nri profaịlụ: 2 setịpụrụ
● Akara: WAIDA
● Ike: Ike ike <0.05 / Ndidi +/- 0.001
Nke gara aga: China OEM OEM China akpụzi ndị na-emepụta na-emepụta-OEM ODM fastener customization service-RAISING-Elec
Osote: OEM ODM maka usoro oge opupu ihe ubi niile
Oyi eriri igwe Spring
Omenala nkenke Springs
Mmiri eriri igwe na -ekpo ọkụ
Nlụpụta nke nkenke oge opupu ihe ubi
Igwe ịkpụzi igwe nri igwe anaghị agba nchara
Nkịtị Cylindrical Spring
Nhazi oge opupu ihe ubi
Onye kere opupu ihe ubi
Pịgharịa Akwụkwọ mpịakọta cone
Mmiri isi mmiri
Die mgbatị metal ngwaahịa customization
Ọrụ akụkụ akụkụ OEM ODM
Ọrụ nkwado maka ngwaahịa mmiri
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Aluminum CNC Machined Parts, Ihe nkedo, Ọnwụ nkedo Magnesium, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile